ပလုံတုံး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
တာချီလိတ် ရှမ်း ပြည်နယ်
အဖန် ငါး ရာငါး ကမ္ဘာ
Started this discussion. Last reply by Hnin Wai Lwin Jun 12, 2012.3Replies3Likes
အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာဆိုတာ...ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများရဲ့ လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတွေအကြောင်း စာတွေရေးပေးနေတာသိတော့ ဒကာတစ်ယောက်က “အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမှာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
phyuthi သည်ပလုံတုံးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မေ 4, 2014
ပလုံတုံး သည်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s ၏ 'ရဟန်းတော်များနှင့် အင်တာနက်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
nyansoe liked ပလုံတုံး's discussion အဖန် ငါး ရာငါး ကမ္ဘာ
ပလုံတုံး liked မောင်ဖိုးသီး's video
ပလုံတုံး သည်လှိုင်ကျော်ထွေး's ၏ 'စုပေါင်း ဆင်နွှဲ (၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ပလုံတုံး သည်cosajaṅ's ၏ 'ဓနုဖြူမြို့ အောင်ချမ်းသာဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း၌ သာသနာ့ပရဟိတ အသင်းအလှူ ဓါတ်ပုံများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ပလုံတုံး liked နီစံ (အနီ)'s group အဘိဓမ္မာ ဌာန
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) liked ပလုံတုံး's discussion အဖန် ငါး ရာငါး ကမ္ဘာ
ပလုံတုံး joined နီစံ (အနီ)'s group
ပလုံတုံး သည်aungaung's ၏ 'သေခြင်းကင်းတဲ့အလှတရား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ပလုံတုံး သည်pwinphyuhlaingကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဓမ္မ မိတ်ဆွေ အသစ်တစ်ယောက်တိုးလို့ ၀မ်းသာပါတယ် မသိတာရှိရင်လည်းမေးပါ သိသလောက်ဖြေပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ"
ပလုံတုံး sharedaprofile on Facebook
ပလုံတုံး shared A BuddhismworldAdmin's blog post on Facebook
ပလုံတုံး and မတင်တင်မိုး are now friends
4:56pm အချိန်မေ 4, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:40pm အချိန်ှဧပြီ 29, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:45am အချိန်ှဧပြီ 29, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။